Iwe Unogona Sei Kuwana Chibvumirano cheWiricheya? | Karman® Mawiricheya
Mawiricheya, zvemagetsi Mawiricheya, kufamba scooter, nezvimwe midziyo yehurema anogona kuva zvinodhura. Naizvozvo, vanhu vazhinji vanoomerwa nekukunda iyo mutengo yekuwana izvi midziyo muAmerica. Neraki, pane akati wandei rubatsiro rwemawiricheya zviwanikwa zviripo zvekubatsira kufukidza iyo hombe mutengo of mavhiripu nezvimwe kufamba Midziyo.
Grants inzira yakajairika yekuwana mavhiripu izvo zviri zvako mutengo range. Mipiro inopihwa nevasiri-purofiti uye mapoka enharaunda. Vari akaita kupa rubatsiro rwemari kune avo vanoda a wiricheya. Aya ma grants anowanzo kupihwa neasina-purofiti muUSA pane yekutanga kuuya yekutanga kushandira hwaro.
Yekutanga kushandira hwaro inoratidza kushomeka mumasevhisi erubatsiro. Vanhu vachazongopihwa rubatsiro kana iyo isiri-purofiti sangano riine mari uye zviwanikwa zviripo. Zvikasadaro, ivo vanhu vanoiswa pane yekumirira runyorwa.
Uyezve, kana paine muganho kumari shoma inowanika, kune hombe dziva remasangano anopa zvipo. Izvo zvakasiyana mhando yemasangano anowanikwa anonongedza kune chaiwo mamiriro nekuremara kunounza bhenefiti huru kuvanhu. Nepo zvipo nemikana zvingangosiyana muhuwandu, sekuziva kwesangano rese, zvishoma zvese zvinoverengeka. Mune mamwe mazwi, one wiricheya inoita mutsauko wese kune mumwe munhu.
Chekupedzisira, isu takanyora pasi zvimwe zvirongwa zvinopa rubatsiro rwe Mawiricheya, zvemagetsi Mawiricheya, kufamba scooter, nezvimwe kuremara Midziyo.
NTAF Emergency Grant Chirongwa
Kutanga, iyo NTAF Emergency Grant Chirongwa inopa rubatsiro rwemari nerubatsiro rweimwe chete. Iyo Individual Grant Chirongwa mibairo yezvipo kune vanhu vane hurema kana musana kuipa.
Izvi zvinobatsira kuvhara mutengo we ramp uye / kana kugadzirisa midziyo. Nekudaro, vanhu vakakuvara vanogona kutsvaga rubatsiro rwekuvhara chikamu kana zvese zvemubhadharo we Mawiricheya, maveni, uye zvemagetsi Mawiricheya.
Chechipiri, Wheel to Walk isiri-purofiti inobatsira vana nevakuru vechidiki (vane makore angangoita makumi maviri) vakaremara kuitira kuti vagowana kurapwa midziyo kana masevhisi anga asati akapiwa neinishuwarenzi yavo. Ivo vane muunganidzwa wakakura wezvinhu kubva Chichemo chemaoko uye mawiricheya emagetsi kugadzirisa vanofamba-famba uye zip zac macheya. Sangano ravo rinovimba nekutenda kwavo kuti hapana mwana kana mudiki munhu mukuru ane zvinodiwa anofanirwa kugara asina zvinhu zvinogona kuvandudza ari unhu yehupenyu hwake.
Fona (503) 257-1401
Mawiricheya 4 Vana
Iri isangano rinonyanya kupa vana. Ivo vane zvishoma mawiricheya madiki izvo zvekushandisa nemunhu mudiki. Kunyangwe zita ravo ringave Mawiricheya 4 Vana, zano ravo harisi kungopa chete mavhiripu yeAmerica remara vana. Chinangwa chavanacho ndechekupa mwana wese kufamba zvinetso mukana wakanakisa weku Rarama hupenyu kusvika pakuzara kwaro. Mawiricheya 4 Vana vanozovabatsira nekuvapa zvakaringana, zvakashongedzerwa mavhiripu, uye zvakare kubatsira ne ramp, kugadziridzwa kwemusha, wiricheya anosimudza, uye nhandare dzakagadzirwa.
Yakajeka Mangwana Grant
Iyo Multiple Sclerosis Foundation iri kupa iyo Yakajeka Mangwana Grant. Chipo chinogona kupa zvinhu uye masevhisi anoitirwa kuvandudza ari unhu of upenyu yevaya vakaremara. Ivo vanopa yakakwira mari yekupihwa mubairo we $ 1,000. Electric Mawiricheya uye Chichemo chemaoko inogona kuwanikwa kuburikidza nechipo ichi.
Batsira TARIRO Rarama
Vhura nzira huru yekuunganidza mari ye mari yekufambisa neRubatsiro Tariro Rarama hupenyu hwehungwaru pamwe nerubatsiro. Ivo vane anoda kusvika makumi mana emakore ebasa kuzita ravo uyezve vane yakakwana rudo chiyero. Iri sangano risingabatsiri rinopa yakachengeteka uye yakaratidza nzira yekuti vanhu vaunganidze mari nezvipo zvinogona kuvabatsira kufamba zvinodiwa maererano nekutengwa kwe Mawiricheya, zvemagetsi Mawiricheya, kufamba scooter, nezvimwe kuremara Midziyo.
Sangano iri rinopa rubatsiro uye rubatsiro kune vanhu vanotambura neCSI kana kuoma mitezo. Ivo vanozopa mubairo unosvika kumadhora zviuru gumi nechimwe chaicho chinodiwa chinhu.
Christian Fund yeiyo remara (CFD)
Iyo Christian Fund yeiyo remara (CFD) inopa yakakwira madhora chiuru nemazana mashanu emari kune munhu ane kuremara-zvinodiwa. Munhu wacho ane rubatsiro kubva kuchechi iyo inoda kuenzanisa mari inogamuchirwa kuburikidza nerubatsiro.
Muscular Dystrophy Sangano
Iyo MDA Yenyika Zvishandiso Chirongwa inotora mipiro yakati wandei yezvakagara zviriko asi zvakachengetedzwa zvakanaka zvekurapa midziyo uye anozvipa kune vanhu avo inoda kwavari.
Pakupedzisira, Grants / Rubatsiro rwemari kuneVanhu kubva Iyo Reeve Foundation ine runyorwa rukuru rwemasangano aripo. Ivo vanoonekwa zvinoenderana nezvavanoda nenzvimbo. Izvo zviwanikwa zvakanyorwa mu pdf ndizvo akapiwa nezve ruzivo rwezvinangwa chete uye hazvivimbise kutsigirwa kwemasevhisi kana kukodzera kwemasevhisi. Ndokumbira utaure nemasangano akanyorwa kuti udzidze nezve kukodzera.
Yunivhesiti Inobatsira Kumisikidza Wiricheya Yakajairwa
Kupa maWheelchair - Kupa Kure Chigaro chako
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya uye tagged kuremara, isina kurema wheelchair, asingaremi mawiricheya, wiricheya, nhau dzewiricheya, kufamba newiricheya, wiricheya mushandisi, mavhiripu.